नेताहरूको प्राथमिकता : एकताको आवरणमा मन्त्री पदको सुरक्षा ! -
काठमाडौँ । चुनावलगत्तै पार्टी एकताको कोर्स अगाडि बढाउने सहमति जनाए पनि एमाले र माओवादी शीर्ष नेता सम्मिलित पार्टी एकता संयोजन समितिको वैठक बस्न सकेको छैन । पछिल्लो पटक कात्तिक १५ मा एकता संयोजन समितिको वैठक बसेको थियो ।
चुनावपछि पार्टी एकताको सघन संवादमा एमाले र माओवादीका दोस्रो तथा तेस्रो तहका नेताहरू जुटने अपेक्षा त्यहीँभित्र धेरै कार्यकर्ताले गरेका थिए तर उनीहरू अहिले यस्तो संवाद र छलफलमा जुटेका छैनन् ।
त्यसो भए के गर्दैछन त ती नेताहरू ? के चुनावपछि अहिले नेताहरूको प्राथमिकता बदलिएको छ ?
हामीले यी प्रश्नको जवाफ खोज्न एमाले र माओवादीभित्र चलिरहेका राजनीतिक दौडधूप र नेताहरूले चलाएका गोप्य वैठकमा भएको कुराकानी बुझ्न खोज्यौँ । यसका लागि एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका केही नेताहरूसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्यौँ । ती नेताहरूसँगको कुराकानीमा आएको निष्कर्ष छ, ‘नेताहरू पार्टी एकतालाई सहज बनाउनेतिर होइन आफ्नो पदको सुरक्षामा केन्द्रित छन् । कसैलाई मन्त्री चाहिएको छ, कसैलाइ मुख्यमन्त्री र कसैलाई एकीकृत पार्टीमा आफ्नो स्थानको चिन्ता छ ।’ यसकारण पार्टी एकताभन्दा पनि अहिले नेताहरूको चासो आफ्नो सुरक्षामा छ र यही सुरक्षाको खोजीमा पार्टीभित्र र पार्टीको गुटभित्रमा होइन नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र र मिडिया मार्फत लबिङ तीव्र पारेका छन् ।
अनौपचारिक कुराकानीमै एमालेका एक पोलिटब्युरो सदस्यले सुनाए, ‘एकताको कुरा त त्यस्तै हो, धेरै नेतामा कसरी पद छिटो प्राप्त गर्ने भन्ने चिन्ता मात्र छ । जसरी हुन्छ छिटो पद चाहिएको छ । सबैले आफ्नो दाबेदारी पेश गरेका छन् । एकताको आवरणमा मन्त्रीको पदको सुरक्षा खोजिरहेका छन् ।’अनौपचारिक कुराकानीमै एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले अर्को रमाइलो कुरा सुनाए, ‘एकतापछि के हो के हो, भविष्यमा हुन पनि सक्छ न हुन पनि सक्छ । अहिले चुनाव जितेको बेला पनि छ । बहुमतको सरकार पनि बन्दैछ । धेरै नेतालाई यो मौका गुमाउनुहुन्न भन्ने चिन्ता छ ।’
उनका अनुसार अहिले एमालेमा पार्टी अध्यक्ष ओली र माधव नेपाल समूहमा आआफ्नो तर्फबाट मन्त्री हुन सक्ने व्यक्तिमाथि छलफल भइरहेको छ । त्यसबाहेक हरेक नेताहरूको व्यक्तिगत दौडधूप पनि उत्तिकै रहेको उनले सुनाए । यसबाहेक पहिलो र दोस्रो तहका भनिएका वरिष्ठ नेताले एकतामा आफ्नो पद कहाँ सुरक्षित गर्ने भन्नेमा बढी समय खर्चेका छन् ।उता माओवादीभित्र पनि मन्त्री पद प्राप्तिका लागि एक दर्जनभन्दा बढी नेताहरूको दौडधूप सुरु भएको छ ।
उनीहरूले पनि पार्टीभित्र, आफ्नो गुटभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र र मिडियामा पनि आफ्नो लबिङ सुरु गरेका छन् । माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयका एक सदस्यले अनौपचारिक कुराकानीमा भने– ‘प्रचण्डलाई भेट्न जाने माओवादी केन्द्रका हरेक नेताले यसपालि मन्त्रीपरिषद्मा आफूलाई नछुटाउन आग्रह गर्दै आएका छन् ।’
ती नेताका अनुसार नेताहरूले पार्टीभित्र अनौपचारिक रूपमा दावी पेश गरिसकेका छन् । अहिले मन्त्री पद किन पेचिलो बन्दै गएको छ भने संविधानले २५ जनाको मन्त्रीमण्डलको परिकल्पना गरेको छ । अझ आयोगका सिफारिस अनुसार मन्त्रालय बनाइयो भने त १५ मन्त्री मात्र हुनेछन्, अरू राज्य र सहायक मन्त्री बन्नेछन् । ठूला नेता धेरै यसपालि संसदमा हुनेछन्, त्यसकारण मन्त्रीको आकाङ्क्षी धेरै हुनेछन् ।
केन्द्रमा मात्र होइन प्रदेश मुख्य मन्त्रीको लडाइँ पनि कम पेचिलो छैन । हरेक प्रदेशका मुख्य मन्त्रीका दावेदार अहिले काठमाडौँमा छन् । उनीहरूले लबिङ पनि सुरु गरेका छन् । १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका एक दाबेदारको भनाइ छ, ‘सबैले आ–आफ्नो शक्ति अनुसार दौडधूप गरेका छन् । यस्तोमा कोही पनि पछाडि पर्न चाहन्न ।’
एमालेबाट मन्त्रीका आकाङ्क्षी
एमालेबाट भीम रावल, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, धनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, सुवास नेम्वाङ, पार्वत गुरुङ, रवीन्द्र अधिकारी, सोमप्रसाद पाण्डे, लालबावु पण्डित, अग्नि खरेल, नागेन्द्र चौधरी, पद्मा अर्याल, गोकुल बास्कोटा, महेश बस्नेत, जीवनराम श्रेष्ठ, प्रेम आले, नरबहादुर धामी, गणेश ठगुन्ना, दीपकप्रकाश भट्टलगायतका नेता मन्त्रीको दौडमा छन् ।
माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा, टोपबहादुर रायमाझी, वर्षमान पुन, देव गुरुङ, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, पम्फा भुसाल, मात्रिका यादव, हरिबोल गजुरेल, अग्नि सापकोटा, देवेन्द्र पौडेल, चक्रपाणी खनाल बलदेव, राम कार्की, लेखराज भट्ट, अमनलाल मोदी, सन्तकुमार थारु, हितबहादुर तामाङ, कमला रोका, सुरेश राईलगायतका नेताहरू मन्त्री बन्ने दौडमा छन् ।
मुख्यमन्त्रीमा पनि उस्तै छ दौड
प्रदेश १ मा एमालेका चार नेता मुख्य मन्त्रीको दौडमा छन् । भीम आचार्य, शेरधन राई, राजेन्द्र राई र हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री दौडमा उत्रिएका छन् ।
प्रदेश २ मा मधेसवादी दलको सरकार बन्ने सम्भावना रहेकाले यहाँ एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता मुख्य मन्त्रीको खासै दौडमा छैनन । सत्यनारायण मण्डल एमालेका मुख्य मन्त्रीका दाबेदारका रूपमा आएका छन् ।
प्रदेश ३ मा एमालेबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य, पशुपति चौलागाईं, राजेन्द्र पाण्डे, अरुण नेपाल र केशव स्थापित मुख्य मन्त्रीको दौडमा छन् ।
प्रदेश ४ मा एमालेबाट पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र किरण गुरुङ मुख्य मन्त्रीको दौडमा छन् ।
प्रदेश ५ मा एमालेका शङ्कर पोखरेल सबैभन्दा अगाडि छन् । उनको प्रतिस्पर्धामा अर्को कोही नेता मैदानमा उत्रेका छैनन् ।
प्रदेश ६ मा माओवादीको दाबी छ । माओवादीका तर्फबाट महेन्द्रबहादुर शाही र नरेश भण्डारी मुख्य मन्त्रीको दौडमा छन् । एमालेले पाए यहाँबाट प्रकाश ज्वाला पनि मुख्य मन्त्रीका प्रमुख दाबेदार हुन् ।
प्रदेश ७ मा पनि माओवादीको दाबी छ । यहाँ माओवादीका नेताहरू वीरमान चौधरी र झपड बोहोरा मुख्य मन्त्रीका दाबेदार छन् । एमालेका प्रकाश शाह, दीर्ध सोडारी र तारा लामाले पनि मुख्य मन्त्रीको दाबी पेश गरेका छन् ।
उदयपुरमा लागूऔषध कारोवारी ५ युवक पक्राउ